२ वर्षअघि ब’न्ध्या’करण गरिसकेका श्रीमानलाइ श्रीमतीले ‘ग’र्भवती छु’ भनेपछि… – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रिय२ वर्षअघि ब’न्ध्या’करण गरिसकेका श्रीमानलाइ श्रीमतीले ‘ग’र्भवती छु’ भनेपछि…
काठमाडौं। एक व्यक्तिलाई उनकी पत्नीले आफू ग’र्भवती भएको जानकारी दिएपछि उनी झ’स्किए । यस्तो यसकारण भयो किनकि ती पुरुषले २ वर्षअघि स्थायी ब’न्ध्या’करण भ्या’से’क्टो’मी गराइसकेका थिए ।
तर, मैले २ वर्षअघि भ्या’सेक्टोमी गराएको थिएँ । यो बच्चा मेरै हुने कति सम्भावना छ ? के उनको अरु कोहीसँग पनि सम्बन्ध हुन सक्छ ? धेरै समयदेखि हामी एकसाथ बसिरहेका छौं र हामी धेरै राम्रोसँग संवाद गर्छौं । मलाई विश्वास लाग्दैन कि उनले मलाई धो’का दिइन् होला ।